Ubuntu namaphrofayela: UDan Rayburn | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Okufakiwe » Ubuntu namaphrofayli: UDan Rayburn
Ubuntu namaphrofayli: UDan Rayburn
I-Broadcast Beat ka- “2019 I-NAB Bonisa Amaphrofayli aseNew York ”uchungechunge lwezingxoxo nochwepheshe abavelele embonini yezokukhiqiza abazobamba iqhaza I-NAB Bonisa INew York (Oct. 16-17, 2019).
UDan Rayburn uvame ukubhekwa njengongoti ophambili embonini yezokusakaza ekusakazeni imidiya nevidiyo eku-inthanethi. Ngisanda kuba nethuba lokuxoxisana noRayburn, futhi isipiliyoni empeleni sasiyinkambo yokuphahlazeka embonini yokusakaza nekusasa laso.
Ekuqaleni kwengxoxo, uRayburn walungisa ukucabanga kwami ​​ukuthi uzoqala ekusakazeni. Wachaza: “Bengingaveli embonini yezokusakaza, kodwa kunalokho ngemboni yokulungisa amakhompyutha, futhi ngaqala ngokusakaza ubuchwepheshe bemidiya ngengozi. Ngemuva kokujoyina ezempi, ngaphuma ngaba unjiniyela wohlelo oqinisekisiwe wemikhiqizo ye-Apple. Nganginomthwalo wokuya esizeni ngiya ezindaweni zamakhasimende e-NYC ukulungisa i-hardware esekwe ku-Apple eyayingaphansi kwewaranti yi-Apple. Cishe ngaso leso sikhathi, ngo-1995, i-Apple yaxhasa umcimbi obizwa nge-Macintosh New York Music Festival [bheka isithombe esingenhla], okwaba yisingeniso sami sokuqala ku Multimedia kuwebhu. Umcimbi ububandakanya amakilabhu angaba yishumi nantathu e-NYC edonsa ngendlebe ukufaka umculo kungakapheli izinsuku eziningi ku-web. Ku-1996, ngamamodemu we-14.4 asakazekile futhi asakaza ubuchwepheshe bemidiya kusuka Ama-RealNetworks- ke Progressive Networks-ekwazi ukukhiqiza ukusakazwa komsindo eduze nesikhathi sangempela, umcimbi ukhule waba cishe amakilabhu amabili anezintambo, esakaza ngaphezu kwamaqembu angama-300 esikhathini esiyizinsuku ezinhlanu. Lokho bekuyisingeniso sami sokuqala ngomqondo wokuletha okuqukethwe kwesikhathi sangempela kubasebenzisi kuwebhu, futhi bengicabanga ukuthi bekuyikusasa lomculo. Ngakho-ke ngayeka ukulungisa igiya le-Apple ngasiza ekutholakaleni inkampani ekhiqiza i-webcasting bukhoma. ”
“Njenganoma yiliphi ibhizinisi, izinhloso nezinselelo ziyashintsha ngokuhamba kwesikhathi, kuncike kubashayeli bezimakethe nokuzibamba. Ngenkathi ngisungula i-Live On Line ngokubambisana, ividiyo yayingekho, akekho owayene-broadband, futhi kwakungekho emikhiqizweni yamashalofu kanye nezinsizakalo ezazivumela ukusakazwa kwewebhu. Kwakungubuciko nekhono ngempela ukukwazi ukusakaza bukhoma kuwebhu futhi sikuhlanganise konke ndawonye. Namuhla, akekho noyedwa ocabanga okuningi ngakho njengoba ubuchwepheshe buhle, buyabiza, futhi busebenziseka kalula. Nge-Globix, lokho kwakuyisikhathi sesikhathi sika-1998-2002 lapho ividiyo yaqhuma ngempela kuwebhu, abantu abaningi baqala ukuthola ukuxhumana kwe-DSL, futhi ukusakazwa kwevidiyo kwasusa ngempela. Nge UkusakazaMedia.com, leyo kwakuyinkampani yezindaba, ngakho-ke inhloso lapho kwakuwukufundisa imakethe kuphela. Inselelo ngaso sonke isikhathi wukuqinisekisa ukuthi uyazi ukuthi iziphi izinsizakalo imboni ezidingayo, ukuthi zifuna kanjani ukuthola imininingwane yabathengi nokuthi yiluphi uhlobo lokuqukethwe olubaluleke kakhulu kubo. ”
Kuleli qophelo, kufanele ngivume ukuthi imibuzo eminingi elandelayo engiyibuze uRayburn ibimayelana nezici zokusakaza engangifuna ukwazi ngazo uqobo. Isibonelo, ngambuza ukuthi ukusakaza kungagcina sekuthathe indawo yokusakaza kwendabuko. Waphendula wathi: “Umuntu akanakuthatha omunye, bayancoma omunye komunye. Zombili izindlela zokuletha ividiyo kubasebenzisi zizoba khona. Imayelana nokusebenzisa ubuchwepheshe obufanele ukuletha ividiyo elungile, kumsebenzisi ofanele, kudivayisi efanele, nekhwalithi elungile yesipiliyoni. Obunye ubuchwepheshe ngokuvamile abusoze bususa obunye. Umbono wokufakwa esikhundleni ohlongozwayo uhlale ukhanga kakhulu kuneqiniso lesisombululo esisetshenziswayo. ”
Ngakhululeka lapho ngizwa ukuthi, yize engomunye wompetha abakhulu bezindaba zokusakaza, uRayburn akayingeni inkolelo yokuthi ukusakazwa ekugcineni kuzosusa imidiya ebonakalayo phakathi kwama-aficionados efilimu yakudala ne-TV. Ngempela, lapho ngimbuza ukuthi ngabe laba baxhumanisi ababili bazoqhubeka nokubakhona yini, impendulo kaRayburn yayingathandabuzeki. “Impela. Abathengi banezidingo ezahlukene nokuthanda kwabo ekukhetheni okuqukethwe nokuthi bakusebenzisa kanjani. Kwabanye, bafuna imithombo yezindaba ephathekayo futhi inikeza ikhwalithi engcono kakhulu. Abanye bangakujabulela ukuhweba ngekhwalithi ukuze kube lula. Futhi amamodeli webhizinisi ahluke ngokuphelele kumahhala (i-AVOD), okubhaliselwe (i-SVOD), akhokhela ukuqasha, akhokhele ukuba ngumnikazi (wokulanda kwidijithali) nemidiya ephathekayo. Abukho ubukhulu obulingana nabo bonke abathengi futhi ukukhetha kuyinto enhle. ”
Ngibe sengibuza uRayburn ukuthi ngabe kukhona yini izinkampani ezintsha azibonayo ezinikeza izinkundla zokusakaza ezisezingeni eliphakeme kakhulu, njengeNetflix, i-Amazon Prime, neHulu, noma yimuphi umncintiswano obucayi ngokuzayo. “Uma uthi 'ukuncintisana,' izinsizakalo eziningi azincintisani empeleni. Ezinye zisakazwa bukhoma, ezinye zifunwa nje, kanti ezinye zombili. Ezinye zigxile kokuqukethwe komndeni, ezinye kokungokoqobo kanti ezinye ziqondiswe ezemidlalo. Kepha okufanele unake ngokuqinisekile i-Disney +, i-Apple TV +, NBC, HBO Max, noQuibi. Onke anezikhwama ezijulile, amadola amakhulu wokumaketha angawasebenzisa nezindlela eziningi zokuqhakambisa izinsizakalo zawo. ”
Ngikhuluma ngokufika kwabathembisi abasafufusa embonini yokusakaza, ngabuza uRayburn ukuthi ucabangani ukuthi angamathuba okuphumelela kwezinsizakalo ezizayo zokusakaza ezakhiwa yiDisney neWarner Brothers, futhi uma iWarner Brothers ingagwema ukwehluleka kwensizakalo yabo yeWarners Instant Archives. “Akukona ukuqhathanisa okufanele phakathi kwezinsizakalo,” wangitshela. “Insizakalo ye-Instant Archives ibiyinhlanganisela yamafilimu, izinhlelo ze-TV, namabhayisikobho enzelwe i-TV athathwe emtatsheni wezincwadi weWarner Brothers. Kwakungewona amakhasimende wokuqukethwe amasha ayekufuna, futhi ayetholakala kuphela ku-Roku neziphequluli. I-Warner manje iphethwe yi-AT & T futhi insiza entsha ebizwa nge-HBO Max izofaka amahora ayi-10,000 2020 wokuqukethwe kwe-premium. Izokwethulwa entwasahlobo ka-XNUMX, futhi okwamanje asazi amanani entengo okwamanje, kepha insizakalo, esekelwa yi-AT & T ngokuqukethwe kwe-HBO, izokuba nabathengi bokuqukethwe abazofuna ukukubuka. ”
Ngokuphathelene nalokho okuye kwaba yisiko e I-NAB Bonisa futhi I-NAB Bonisa ENew York, uRayburn uzokwethula "Ingqungquthela Yokusakaza" ngazo zombili izinsuku zomcimbi olandelayo ka-Okthoba. "Ngiqale ukubambisana kwami ​​ne-NAB ngenza ama-Summits amasha okusakaza emibonisweni yabo eLas Vegas naseNew York City e-2018. Umbukiso uqukethe izikhulumi eziyi-100 ezinsukwini ezimbili ezinamathrekhi amabili futhi unohlu olukhulu lwezikhulumi nabethuli abanjengo-CBS, i-Amazon , Hulu, NBC, I-WarnerMedia / HBO, i-Sling TV, i-FOX Sports, i-Disney, i-NFL njll. Umsebenzi wami ukukhiqiza okuqukethwe okuhle ukusiza ukufundisa, ukwazisa kanye nokunika amandla abasakazi, abashicileli, amapulatifomu we-OTT, abakhangisi nabanye ngamamodeli wokwenza imali nobuchwepheshe be-OTT.
“Imali engenayo ye-Global OTT izofinyelela ku- $ 129 billion ngo-2023. Kungaba ngokukhangisa (i-AVOD), ukuthengiselana (i-TVOD), noma okubhaliselwe (i-SVOD), ukukhetha inketho efanele yokwenza imali nokufunda ukuthi ungayisebenzisa kanjani ngempumelelo kumadivayisi amaningi, aqhutshwa iwebhu i-ecosystem iyinselele. Umbukiso ufundisa ababekhona ukuthi bangayisebenzisa kanjani imali ngokunikela okuqonde ngqo kubathengi (i-DTC) futhi bezwe ukuthi ezinye zezinkampani ezinkulu emhlabeni zenza kanjani imali ngomtapo wolwazi wamavidiyo wabo nokwakha ubudlelwano bomkhiqizo namakhasimende abo. Ngasikhathi sinye, abathengi balindela ikhwalithi yevidiyo ehamba phambili kumadivayisi wabo nakuma-TV noma kuphi, nganoma yisiphi isikhathi. Amapulatifomu nabasakazi be-OTT bayaqhubeka nokuphonselwa inselelo futhi baqhubeka nokuthuthukisa ukuhamba kwabo kwamavidiyo ukuze banikeze ababukeli babo umuzwa omuhle kakhulu wokubuka. Ngakho-ke sihlanganisa konke abadinga ukukwazi ngokuqukethwe kokupakisha, ukubhala ngekhodi, ukuphathwa kwemidiya, ukudlala kabusha, njll. Konke lokhu kusuka kongoti abahola phambili embonini. ”
Ngiphethe ingxoxo yami noRayburn ngokumbuza ukuthi zithini izinhlelo zakhe ngekusasa. Impendulo yakhe iveze isimo sakhe esihle. “Umsebenzi wami ukwaba imininingwane, kungaba kwi-blog yami, mathupha emibukisweni, namalungu abezindaba, kwi-TV benza izingxoxo, njll., Ngakho-ke ngihlala ngizama ukuqaphela amathuba awela indlela yami avumayo ukwenza lokho ngendlela engcono. Kungakho ngibhala inombolo yami kamakhalekhukhwini ekhasini lasekhaya le-blog yami (917-523-4562), futhi ngiphendula zonke izingcingo. Ngeke wazi ukuthi uzokhuluma nobani, yimaphi amathuba azivelelayo, noma izindlela ongakwazi ngazo ukusiza abanye, okusiza imboni yonke ukuthi ikhule. ”
I-2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa Izindaba I-Broadcast Beat Awards Sakaza i-Beat Magazine Umsakazo Wesivumelwano Umhlangano Wokusakaza I-NAB 2015 I-NAB 2016 I-NAB Bonisa I-NAB Bonisa i-2016 imisebenzi ye-nab show I-NAB Bonisa Las Vegas I-NAB Bonisa Ukubhaliswa NAB16 nabshow I-National Association of Broadcast Show Show I-World Production Post sprockit Umlingisi wevidiyo 2019-10-04
Ngaphambilini: I-Broadcast Pix ikhetha iMedialook MFormats neWebRTC ukunika amandla izisombululo zayo ezikude ezizayo
Olandelayo: Umthwebuli zithombe nesihleli sevidiyo